अमेरिकामा जन्मिएकी अढाई बर्ष कि एभा बस्नेतले तोते बोलीमा दशैको दिएको यो हेर्नै पर्ने सन्देश : - Enepalese.com
अमेरिकामा जन्मिएकी अढाई बर्ष कि एभा बस्नेतले तोते बोलीमा दशैको दिएको यो हेर्नै पर्ने सन्देश :
इनेप्लिज २०७५ कार्तिक २ गते १:२८ मा प्रकाशित
अमेरिकामा जन्मिएकी अढाई बर्ष कि एभा बस्नेतले तोते बोलीमा दशैको दिएको यो हेर्नै पर्ने सन्देश | एभा अमेरिकाको भर्जिनिया राज्यको सेन्टरभिलमा बस्छिन ! र यस्ता बालबालिकाले बोलेको नेपाली भाषा लाई प्रोत्साहन गरौ ।
सबैले हिस्सा ( शेयर ) गरौ :
अमेरिकामा जन्मिएकी अढाई बर्ष कि एभा बस्नेतले तोते बोलीमा दशैको दिएको यो हेर्नै पर्ने सन्देश : एभा अमेरिकाको भर्जिनिया राज्यको सेन्टरभिलमा बस्छिन ! र यस्ता बालबालिकाले बोलेको नेपाली भाषा लाई प्रोत्साहन गरौ । सबैले हिस्सा ( शेयर ) गरौ :
Posted by Bijay Thapa on Thursday, October 18, 2018